Daryeelka caafimaadka | Macluumaad ku saabsan caafimaadka iyo caafimaadka maskaxda ka USAHello | USAHello
In Maraykanka, inaad bixiso lacag si ay u tagaan dhakhtarka. Caymiska caafimaadka waxa ay bixisaa daryeelkaaga caafimaad markii aad tagto dhakhtarka. Akhri wax dheeraad ah
Si ay u tagaan dhakhtarka, aad leedahay si aad u hesho dhakhtar iyo ballan samaysato. Akhri wax dheeraad ah
Dhakhaatiirta iyo khabiiro
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan ee dhakhtarrada. Carruurta iyo dadka waaweyn arko dhakhaatiirta kala duwan. Akhri wax dheeraad ah
Daawada iyo daawada
In Maraykanka, waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo ah daawo. Waad iibsan kartaa daawooyinka qaar ka mid ah dukaanka. laakiin mararka qaarkood, waa in dhakhtar ku siin daawadaada. Akhri wax dheeraad ah
caafimaadka maskaxda waa caafimaad maankiinna. Your caafimaadka maskaxda saamayn ku leh sida aad u malaynayso iyo dareemaan. Akhri wax dheeraad ah
Sida aad la qabsato dhaqan cusub, laga yaabaa in aad maraan waqtiyo kala duwan, halkaas oo aad ka dareento siyaabo kala duwan. Mid ka mid ah marxaladaha kuwaas oo loo yaqaan "naxdinta dhaqameed." Akhri wax dheeraad ah
beddelidda jinsiga iyo isbadalka
beddelidda jinsiga waa hawl caafimaad oo kasta oo caawiya dadka transgender dhigma ay galmo jirka jinsigooda. Haddii aad rabto in aad bedesho jinsiga, laga yaabaa in aad dhakhtar takhasus ku caawin kara tago. Akhri wax dheeraad ah
Xeerka Daryeelka awoodi karo : warbixin la turjumay iyo videosHorumaray videos iyo macluumaadka luqadaha qaxootiga si ay u caawiyaan qaxootiga fahmin Act Affordable Care. USAHello
My riyo noqdo dhakhtar qalliin ooWaayo, dadka cusub qaar ka mid ah, soo socda si ay America siiyaa fursad ah in ay raacaan riyooyinkooda. Mid ka mid ah ku cusub hadlayaa goolkiisii ​​noqdo dhakhtar qalliin oo.
Daryeelka caafimaadka: daaweynta bukaanka qaxootigaIsgaarsiinta ee aad imporant isbitaalka. turjubaan siinayaa talo xirfadlayaasha caafimaadka la soo galootiga shaqada, asylee, iyo dadka bukaanka ah ee qaxootiga.